Nin Turki ah oo xaaskiisa uur leh la sawiray “daqiiqado ka hor intaanu u dilin si uu u dalbado lacagta caymiska nolosha” | Jowhar somali news leader
Home NEWS Nin Turki ah oo xaaskiisa uur leh la sawiray “daqiiqado ka hor...
Dacwadda loo diyaariyay dambiga ah “dil ula kac ah” oo ka dhan ah ninkan ayaa sheegtay in “uu qorsheeyey dilka xaaskiisa isaga oo marka hore qaadaya caymiska shilalka shaqsiyeed iyada oo wakiil ka ah iyada oo dammaanad laga qaadayo 400,000 oo lacagta Turkiga ah (£ 40,865) iyo halka kaliya ee ka-faa’iideyste laftiisa ayaa ahayd.
Dacwad oogeyaashu waxay ku andacoodeen in sababta kaliya ee ay ugu fadhiisteen dusha sare muddo seddex saacadood ah inay tahay inuu hubiyo inuusan qofna ag joogin
Waxay ku andacoodaan in isla markii Aysal ogaadey inay kali yihiin, uu si bareer ah u diley asaga oo ka toogtey dhagaxa.
Dacwadda ayaa sidoo kale lagu sheegay in Aysal uu dalbaday caymiska waxyar ka dib, laakiin waa la diiday markii warka baaritaanka la shaaciyay.
Maxkamada sare ee dambiyada ee magaalada Fethiye ayaa xukuntay in lagu sii hayo xabsiga dil ula kac ah.
Wareysi fiidiyow ah, maxkamadda waxay ka dhageysatay dhibanaha walaalkiis Naim Yolcu, oo yiri: ‘Markii aan aadnay machadka dawada Forensic si aan u soo qaadno maydka, Hakan wuxuu fadhiyey gaariga. Qoyskeyga iyo aniga waa nala burburiyey, laakiin Hakan xitaa uma muuqan murugo. ”
Wuxuu raaciyay: ‘Walaashay marwalba way diidantahay amaahda. Laakiin markii ay dhimatay ka dib, waxaan ogaanay inay haysato saddex amaah oo uu Hakan ku soo saaray aniga oo ku hadlaya magaca walaashay.
Semra sidoo kale waxay ka cabsan jirtay joogga, maxay tahay cayaaraha xad dhaafka ah ee ay sameyn doonto markay ka cabsaneyso meelaha dhaadheer?
Markii wax laga weydiiyay khidmadaha caymiska shakiga leh, Aysal wuxuu yiri: ‘Waxaan xiiseynayay cayaaraha xad dhaafka ah ilaa 2014; baarashuud, boodbooda bungee, rafting. Taasi waa sababta aan u lahaa caymiska nolosha ka hor intaanan guursanin. ”
Aysal ayaa sidoo kale wax laga weydiyay qodobka kujira caymiska shilka inuu isagu dhaxli doono hadii Semra dhinto.
Aysal sa; Ma aanan baarin siyaasada inbadan. Bangiga ayaa diyaariyey waraaqaha. Waxaan u geeyay xaaskeyga si aan u saxiixo. Kama warqabin inuu jiro maqaal noocaas ah. ”
Wuxuu dafiray inuu isagu mas’uul ka ahaa dhimashadeeda wuxuuna yiri: ‘Ka dib markii aan sawir qaatay, xaaskeyga waxay taleefanka dhigtay boorsadeeda. Markii dambe waxay iga codsatay inaan siiyo taleefanka.
‘Waan kacay ka dibna waxaan maqlay xaaskeyga oo gadaasheyda ka qaylinaysa aniga oo dhawr tallaabo u jira inaan taleefanka ka soo saaro boorsadeyda. Markii aan soo noqday iyadu ma joogin. Xaaskeyga kuma cadaadin. ”
Baaritaanka ayaa wali socda.
Previous articleCiidamo Maraykan ah oo ku qabtay hub xeebaha dalka Soomaaliya
Next article‘Hotel Rwanda’ hero sues for terrorism